PARMA VS JUVE, FIORENTINA VS NAPOLI: Shaxaha & safafka ay kusoo geli karaan | Hadalsame Media
Home Ciyaaraha PARMA VS JUVE, FIORENTINA VS NAPOLI: Shaxaha & safafka ay kusoo geli...
PARMA VS JUVE, FIORENTINA VS NAPOLI: Shaxaha & safafka ay kusoo geli karaan
(Roma) 24 Agoosto 2019 – Waxaa Caawa bilaabmaya Horyaalka Talyaaniga waxaana lagu furayaa laba kulan oo ad adag, waana Parma oo marti gelinaysa horyaallada Juventus 18:00, iyo Napoli oo u safraysa Florence si ay ula fiidsato Fiorentina 20:30.
Dhanka Parma: Kucka oo murqaha ka sheeganaya ayaa kaydka kululaynaya: Waxaa booskiisa buuxinaya Brugman ama Grassi midkood. Weerarka waxaa hal boos ku hardmaya Karamoh-Kulusevski.
Dhanka Juve: Waxaa boos isku haysta Dybala oo 9 beenaad dheeli kara iyo Higuain. Garab weerarka waxaa buuxinaya Douglas Costa bidix iyo Bernardeschi dhanka midig. Daafaca dhexe Bonucci ayaa ka cad cad De Ligt. Danilo ayaa laga door bidayaa De Sciglio. Rugani looma yeerin, Ramsey lama heli karo.
KAYDKA LABADA KOOXOOD:
Dhanka Viola: Lirola shaki ayaa ku jira: Haddii aanu diyaar noqon waxaa safanaya Venuti. Dadabka bidix ee daafaca waxaa gelaya Terzic oo Biraghi oo Inter u socda nasinaya. Ribery hadda unbuu yimid, balse Montella durba waa dheelsiin karaa.
Dhanka Napoli: Milik oo daal murqeed ka sheeganaya lama heli karo, weerarka waxaa boos ku leh Mertens. Ounas looma yeerin sidoo kale.
Previous articleDhismaha jidka isku xiraya Xamar & Afgooye oo dib loo bilaabay & isbedello waawayn oo la sameeyay + Sawirro
Next articleDF Somalia oo ciidamo dheeraad ah gaystey magaalada Dhuusamareeeb & shir halkaa ka furmaya